डा केसीको मुद्धा न कांग्रेसको, न अन्य स्वार्थ समूहको ?
२०७५ साउन ३ गते १३:४६
नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा छन् । सत्याग्रहबाट चिकित्सा शिक्षाभित्र रहेको वेथिती, विकृति र दशकौँदेखि हाबी हुँदै आएको गलत प्रवृत्ति सुधार्न आन्दोलन छेडेका हुन् । राजधानी शहर छाडेर कर्णाली रोजेका डा. केसीको मागलाई राजनीतिक लेप लगाइनु निन्दनिय काम हो । डा....
कांग्रेस जनताले पटकपटक चाखेको पुरानो स्वाद
२०७५ साउन १ गते १६:३१
नेपाली कांग्रेस ‘वामको नाममा बनेको सरकार’ भन्दै खिसिट्युरी गर्दै सभा समारोह र सामाजिक सञ्जालमा अन्धाधुन्द गाली गरेर ताली बटुली रहेको छ । हुकुमी शासन, अधिनायकवादी, राजा महाराजा शैली, जनयुद्धकालिन पारा यस्तै यस्तै विशेषण लगाएर शब्दको खेति गर्दैछ । चुनावमा खुम्चिएर तिलमिलाएको कांग्रेस त्राण...
आशुकवि प्रधानमन्त्रीमाथि दुई शब्द– मृत्यु शाश्वत सत्य हो
२०७५ असार ३२ गते १४:४३
दुई पचास वर्ष अघि राष्ट्रनिर्माता (यो शब्दको गाम्भिर्यतामाथि केहि बौद्धिकहरु आलोचना पनि गर्छन्) पृथ्वीनारायण शाहले सपना देखेको ठाउँ(चन्द्रागिरी डाँडा)मा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्धिको सपना देखे र छोटो समयमै कविता मार्फत् आफ्नो भावना पोखे । अर्थात् आशुकवि बने, सायद । त्यति धेरै लालित्यपूर्ण...
२०७५ असार २७ गते १०:०३
माओवादी जनयुद्धका क्रममा ७ बर्ष जेल परेका तिलक शर्माले चार बर्ष पहिले गज्जबको योजना सुनाए । सादगी नेताको छबी बनाएका बर्दियाली नेता शर्मा पूरा आत्मबिश्वासका साथ भन्दै थिए– केरा खेती गर्ने, ०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा लागेको ऋण पनि तिर्ने र स्थानीय पनि...
डा. केसीको अनशन गलत नै हो त ?
२०७५ असार १७ गते १५:५६
काठमाण्डु – नागरिक अभियन्ताको पहिचान बनाएका डा. गोविन्द केसी पहिलेपहिलेका अनशन आफैं कार्यरत शिक्षण अस्पतालमा बस्थे । बेथितीविरुद्ध भन्दै पटकपटक अनशन बसेर नथाकेका डा. केसी यसपटक कर्णाली पुगेका छन् । उनले अनशन थालेपछि हजारौँ समर्थकको लाइन लाग्छ । देशका गिनेचुनेका बौद्धिक जमातहरु उनको पक्षमा...
२०७५ असार ११ गते ८:३०
जेठ ३ मा एमाले र माओवादी एकतापछि नेपाली राजनीतिमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । एकताले विगतमा एकअर्काको कटु आलोचना गर्ने दुई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई एउटै मालामा उनेको छ । र, बनेको छ सबैको छ दुवैको साझा पार्टी– नेपाल कम्नुनिष्ट पार्टी ।...
ट्रम्प र कीम भेटघाट – ‘नयाँ बोत्तलमा, पुरानो ह्विस्की ’
२०७५ जेठ ३० गते १५:४७
एजेन्सी – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता कीम जोङ उनबीच सिंगापुरमा उच्चस्तरीय भेटघाट सम्पन्न भएको छ । एकअर्काका धुरन्धर विरोधीका रुपमा रहेका ट्रम्प र कीमले जब हात मिलाए । यो घटनाको संसारभर एकसाथ चर्चा भइरह्यो । यसलाई संसारले एक ऐतिहासिक घटनाको...
२०७५ जेठ २८ गते १२:१७
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता कीम जोङ उन मंगलबार हुने बहुप्रतिक्षित भेटघाटका लागि सिंगापुर पुगिसकेका छन् । संसारकै चासो दुई शिर्ष नेताको भेटघाटमा रहेको छ । यि दुई नेताको भेटघाटमा एक जना व्यक्ति पनि सामेल हुँदैछन् । जसको...
उत्तर कोरिया एकाएक कसरी बन्यो संसारकै शक्तिशाली ?
२०७५ जेठ २४ गते १८:४६
एजेन्सी – उत्तर कोरियाका नेता कीम जोङ उल २०१८ साल शुरु लगत्तै एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक चर्चाको शिखरमा पुगेका छन् । विश्व राजनीतिका एक शक्तिशाली पात्रको रुपमा संसारले कीम जोङ उललाई मान्न थालेको छ । वर्षौसम्म बाहिरी दुनियाँसँग टाढा रहेका नेता कीम एक बलियो राजनीतिक खेलाडी...
गरिब भएपछि अन्याय अत्याचार त सहनै पर्यो नि !
२०७५ जेठ २१ गते १३:५८
संवाद नं १ प्रश्न – बाबु, आज स्कुल किन नगएको ? उत्तर – खोई, आज स्ट्राइक छ रे । प्रश्न – कस्ले गरेको हो थाहा छ ? उत्तर – खासै थाहा भएन, दाई । बाबामामुलाई हेड टिचरले फोन गर्नु भाको रे । संवाद नं...
काँग्रेस – कम्युनिष्ट पेप्सिकोला र कोकाकोला जस्ता !
२०७५ जेठ १२ गते १२:२६
प्रारम्भ २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । त्यो युग नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएझैं “लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण” गर्ने युग हो । अर्थात् त्यो समृद्धीकरणको...
स्थानीय सरकारको एक वर्ष – गाउँवस्तीमा डोजर नचाउन व्यस्त
२०७५ जेठ १ गते १७:५७
नजिकको सरकार अर्थात जनताको पहुँचको सरकार पाएको एक वर्ष बितेको छ । १९ वर्षदेखि जननिर्वाचित प्रतिनिधी नपाएको स्थानीय सरकारले चुनावमार्फत जनताका मान्छे पाएको थियो । मतदानमा जनताको सहभागिताको प्रतिशतलाई हेर्दा जनता चुनावमार्फत आफ्नो प्रतिनिधी चयन गर्न आतुर थिए भन्ने भान भएको थियो । छिटफुट...
« अघिल्ला 123456… 68 पछिल्ला »